‘कञ्चनपुर घटनामा प्रहरी चुकेकै हो’ – मुलधार न्युज
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > ‘कञ्चनपुर घटनामा प्रहरी चुकेकै हो’
३० भाद्र २०७५, शनिबार ०७:४८
काठमाडौं-बलात्कारपछि हत्याजस्तो संवेदनशील घटनामा प्रहरीले पहिला घटनास्थल सुरक्षित राख्नुपर्छ। आवश्यक पर्‍यो भने घटनास्थल जोगाउन बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, हामीकहाँ त्यो समस्या देख्छु। को र कस्को कार्यकर्ता मर्‍यो भनेर हेरिन्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा हेर्दा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीले लापरबारही नै गरेको पाइन्छ। सुरुमा सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ। पछि जनदबाब आएपछि मात्रै प्रहरी सक्रिय भएको छ।
त्यतिबेला घटनास्थलबाट प्राप्तगर्ने प्रमाण संकलनमा प्रहरी चुकेको छ। गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धान गर्दा समयसीमा तोकिनु हुँदैन। यसले झन् अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ।
यसमा मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा प्रहरी एकपछि अर्को घटनाको अनुसन्धान गर्दा विवादमा मुछिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्रहरी इकाइको अनुसन्धान पद्धति सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। अब पुरानो अनुसन्धान पद्धतिले हुँदैन। डन्डा र आदेशका भरमा अनुसन्धान हुँदैन। यसलाई प्रमाणमुखी बनाउनुपर्छ।
अबको पनि अनुसन्धान जनदबाबले हुँदैन। घटनास्थलमा अनुसन्धानकर्मी पठाउँदा अनुसन्धानका सबै प्रकृया बुझेको र सीन अफ क्राईम अफिसर (सोको) अर्थात विज्ञ टोली पठाउनुपर्छ।
तर, प्रहरीमा त्यस्ता अधिकारी ज्यादै न्युन छन्। अपराध बढ्दो छ। प्रहरीलाई प्रविधियुक्त अनुसन्धान गर्न राज्यले स्रोतसाधन सम्पन्न गराउन सकेको छैन। राज्यले सुराकी परिचालन वा सूचना संकलनमा कति पैसा खर्च गरेको छ ? त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ। प्रहरीले गरेन भनेर मात्रै हुँदैन।
अनुसन्धानको प्रमुख कडी कल डिटेल प्राप्त गर्न प्रहरीले अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ। तत्काल प्रहरीले कलडिटेल हेर्न पायो भने अनुसनधानका धेरै पाटा खुल्छन्। पक्राउ पूर्जीका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था छ।
प्रारम्भीक अनुसन्धानमा प्रहरीले संकास्पद व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ फौजदारी अपराध संहिताले पनि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो परेको हो कि ?
अर्कातिर यस्ता घटनालाई कसैले पनि राजनीतिक रंग दिनुहुँदैन। सरकारले पनि प्रतिपक्षको दबाबमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दबाब दिनु हुँदैन। पीडित पक्षको काम भनेको जतिसक्दो छिटो न्याय खोज्ने हो।
प्रतिपक्षले सरकारको कामप्रति औंला उठाउने गर्छन्। त्यो स्वाभाविक हो। सरकार संयम हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीले संसदमा जफाव दिनुपर्‍यो र प्रहरी नेतृत्वले गृहमन्त्रीलाई जफाव दिनुपर्‍यो भन्दैमा अनुसन्धानकर्तालाई अनावश्यक दबाब दिनु हुँदैन। यसले अनुसन्धान गलत ट्रयाकमा जान सक्छ। बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या भएको प्रकरणमा यो पक्ष पनि देखिएको छ।
(सीआइबीका पूर्वप्रमुख ठकुरीसँग अन्नपुर्ण पोष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)